13 Sentinels: Aegis Rim yeNintendo Shandura Ichawana Kuburitswa kweWestern Gore rinouya
Kutevera chiziviso cheJapan cheNintendo Shandura vhezheni yegumi nematatu Sentinels: Aegis Rim, Sega uye ruoko rwekumadokero rweAtlus vakasimbisa kuti kuburitswa kwekumadokero kuri kuuyawo. Mutambo uyu uchatangwa muNorth America neEurope muna Kubvumbi 13, 12, ari mazuva maviri pamberi pekuburitswa kweJapan. Chiziviso ichi chakaperekedzwa netirailer, yaunogona ... [Verenga zvakawanda ...] nezve 13 Sentinels: Aegis Rim YeNintendo Shandura Ichawana Kuburitswa Kwemadokero Gore Rinotevera
Nyowani Halo Isingaperi BP Kufambira mberi Kwidziridzo yeKuwedzera Yekutanga Game XP Boost
Halo Infinite's gameplay iri kugamuchira rumbidzo inopenya kubva kuvatsoropodzi nevateveri zvakafanana zvichitevera kutangwa kwayo kutanga kwemwedzi uno, asi kunonoka uye kusiririsa kwekufambira mberi kwayo kwehondo kwave kuri nyaya yekupokana. Kune chikwereti chayo, 343 Industries yakakurumidza kuona dambudziko uye inopa XP payout yekutamba mitambo, pane kuti iite chiratidzo… [Verenga zvakawanda ...] nezve New Halo Infinite BP Progression Update kuti Uwedzere Kutanga Mutambo XP Boost
Apple iPhone 13 mini vs Samsung Galaxy Z Flip 3: Yakanyanya Compact Flagship?
MaCompact smartphones imhando isingawanzo kurudziro mazuva ano sezvo makambani anowanzo tarisa pane makuru makuru sezvo zviri izvo zviri kudiwa zvakanyanya. Nekudaro, ini ndichiri kufunga kuti kune musika wemafoni madiki, kana zvishandiso zvakaita seiyo iPhone 12 mini uye 13 mini dai zvisipo. Izvi zvakaita kuti ndifunge - ndeipi yakanakisa compact smartphone mumusika weIndia nhasi? Tichitarisa-tarisa, isu… [Verenga zvakawanda ...] nezve Apple iPhone 13 mini vs Samsung Galaxy Z Flip 3: Yakanyanya Compact Flagship?
Oppo Reno 7 Series Ine Triple Rear Kamera, 90Hz Display Inoenda Zviri pamutemo
Oppo Reno 7 series yakatangwa neChina. Iwo matsva akatevedzana anosanganisira Oppo Reno 7 5G pamwe neOppo Reno 7 Pro 5G uye Reno 7 SE 5G. Mafoni ese matatu matsva eOppo Reno anouya aine AMOLED dhizaini ine gomba-punch dhizaini uye inoratidzira yekumashure kupedzisa. Munhevedzano, iyo Oppo Reno 7 5G uye Reno 7 Pro 5G ese ari maviri zvakare ane flat-mupendero furemu - yakafanana ne… [Verenga zvakawanda ...] nezve Oppo Reno 7 Series Ine Triple Rear Kamera, 90Hz Ratidza Inoenda Zviri pamutemo
Oppo Tsvaga X4 Pro smartphone inonzi yave kupinda mukutanga kwayo kuChina sezvo makiyi eiyo nharembozha yakabuda pamhepo pamberi pekusimbiswa kwepamutemo kubva kukambani. Iyo iri kuuya smartphone inonzi ine 120Hz yekumutsiridza mwero kuratidza. Oppo Tsvaga X4 Pro inogona kunge ichifambiswa neiyo Snapdragon 845 processor. Iyo inonzi inonzi Oppo foni inotarisirwa… [Verenga zvakawanda ...] nezve Oppo Tsvaga X4 Pro Specifications Tipped; Inogona Kusanganisira Snapdragon 845
Enda kune peji 444